March 2018 – Myitter
မိမိကိုယ်တွေ့ ဆေးဓါတ်စာပါ ဒါဏ်ဖြစ်ပြီးမကြာခဏ ခါးနာနေသူများကြက်ခြေထောက် သုံးချောင်ကိုနူးအိသည်ထိ ပြုတ်ပါ ပြီးလျှင်အသင့်ပြင်ထားသည့်ဂွေးတောက်ရွက် လက်တစ်ဆုပ်ကို ထိုကြက်ချေထောက်ပြုတ်အိုးထဲသို့သုံးမိနစ်ခန့်ထည်မွှေပြီး ကြွေပုဂံထဲသို့ထည့်သောက်ပါ။ သုံးကြိမ် သောက် ပျောက်ပါပြီ ( သုခပြည့်ကြပါစေ ) zzm Unicode ခါးနာရောဂါ စှဲကပျနသေူမြားအတှကျ မိမိကိုယျတှေ့ ဆေးဓါတျစာပါ ဒါဏျဖွဈပွီးမကွာခဏ ခါးနာနသေူမြားကွကျခွထေောကျ သုံးခြောငျကိုနူးအိသညျထိ […]
ဘုရားကို..​ယောက္ခမအိမ်​ထင်​​နေကြတဲ့.မိမဆုံးမဖမဆုံးမများ.(မိဘနဲ့မဆိုင်​မှန်းသိတယ်​တမင်​ကို​ရေးတာ.) သမိုင်းဝင်​ပုဂံ​ရွှေစံ​တော်​ဘုရား​ ဒုတိယအဆင့်​​ပေါ်တက်​၍​ယောက္ခမ အိမ်​ကဲ့သို့.ပန်းခြံကဲ့သို့..တည်းခိုခန်းကဲ့သို့ ဘုရားဖူးလာအများပြည်​သူများကြားမှာ ယွပိုး​တွေ​ခေါင်းတက်​ထိုးပြီး​တော်​သလင်းဇတ်​က​နေ​သောသူများပါ စာကြွင်း (​တော်​သလင်းဇာတ်​စခင်းကာစ..မရိုက်​ဖြစ်​လိုက်​တဲ့ပုံ​တွေကအာ့ထက်​ကြည့်​ရအင်​မတန်​ဆိုးပါ​ကြောင်း)…ကိုယ်ကိုကိုယ် ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုး တရောက်ဆိုတာ မနေ့ကျပါနဲ့ ပုံ.ခရက်​ဒစ်​..ပုဂံသတင်း. ဋ္ဌ,​နေဝဏ်း နည်းနည်း​လေး​ပြောချင်​တယ်​ဗျာ စကား ​တွေကြမ်းမယ်​ဗျာ ကြမ်းမှလည်းတန်​ကာကျ​တော့မှာမို့ပါ ။နည်းနည်းတော့ရိုင်းမယ်..နားလည်ပေးပါများများရှယ်​​ပေးကြပါဗျာ) မူစတာဖာ​တွေရဲ့ sex page​တွေမှာ​တွေ့လိုက်​ရတဲ့ ဘုရားဝန်းထဲမှာ ​လေးဘက်​ကုန်းလိင်​ဆက်​ဆံ​နေတဲ့အတွဲကို ​ပြောချင်​လို့ပါ။ ဗုဒ္ဓ […]
☀🗼တနင်္လာ သားသမီးများ အတွက်​ ၂၀၁၈ ခုနှစ်​ တစ်​နှစ်​စာ ဟောစာတမ်းနှင့်​ အ​ဆောင်​ယတြာများ☀🗼
ဤနှစ်တွင် အလုပ်အကိုင်အပြိုင်အဆိုင်များကို ကျော်လွှာနိုင်ပြိး ဂုဏ်သတင်းထင်ပေါ်ကျော်ဇောလာမည်။အစစအရာရာအဆင်ပြေလာမည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာ၌ တာဝန်ယူခြင်း၊တာဝန်ခံခြင်းများလုပ်လျှင်လည်း အေညင်မြင်မူရတတတ်သည်။ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နှင့်သာ-💰ငွေစုဆောင်ပြိး လုပ်ကိုင်သွားမည်ဆိုလျှင် ဤနစ်ဒိအချိန်မှာကြီးပွားလာတတ်သည်။ အကြံအစည်းအားလုံးအောင်မြင်မည်။ပင်ပန်းခံရကြိုးနပ်မည်။ ရာထူးရာခံတိုးပြိး လူကြီးများက လေးစားယုံကြည်၊မည်သူမှာ မလုပ်ချင်သည့် မလုပ်ရဲသည့်၊အလုပ်များကို ယုံယုံကြည်ကြည် ခိုင်းလိမ့်မည်။ ရာထူးတိုး၊ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောခြင်း၊နေရာပြောင်းရွှေခြင်းများဖြစ်လာမည်။-💰ငွေနှင့်နီးနေသည်။ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အဆင်ပြေမည်။ဆန်ကျင်ဘက်လိင်ကြောင့် နည်းနည်း အနှောက်ယှက် ဖြစ်စေရာ တွေပေးမယ်၊ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် […]
လ၀ကအက်ဥပဒေနဲ့ ထောင်ဒဏ်ချခံထားရတဲ့ သေနတ်သမားကြည်လင်း ပြစ်ဒဏ်ကလွတ်မြောက်
လ၀ကအက်ဥပဒေနဲ့ ထောင်ဒဏ်ချခံထားရတဲ့ သေနတ်သမားကြည်လင်းပြစ်ဒဏ်ကလွတ်မြောက် လ၀ကအက်ဥပဒေနဲ့ ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခံရတဲ့ သေနတ်သမားကြည်လင်း ပြစ်ဒဏ်ကနေ ဒီနေ့လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ရုံးထုတ်မှာ ကြည်လင်းကို သံခြေကျင်းခတ်တာကနေ ပယ်ဖျက်ပြီး အရပ်သားအင်္ကျီဝတ်ဆင်ကာ ရုံးထုတ်လာခဲ့တာပါ။ ကြည်လင်းဟာ မြ၀တီ-မဲဆောက်ကို တရားမ၀င်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ခဲ့တာကြောင့် လ၀ကဥပဒေနဲ့ ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခံထား ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး […]